စိတ်ကြိုက်အားသွင်းအားသွင်းပါဝါတိုက်နယ်ဘုတ်အဖွဲ့စက်ရုံ၊ ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - Dongguan Changsen Electronic Technology Co. , Ltd.
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Charger ပါဝါ Circuit Board
၁. မိုဘိုင်းဖုန်းအားလျင်မြန်စွာအားသွင်းနိုင်သည့်အချက်များ၊ အားသွင်းပါဝါတိုက်နယ်ဘုတ် 5V1A မိုဘိုင်းဖုန်းအားသွင်းအားသွင်းစက်အဝင်ဗို့အားသည် ၂၂၀ ဗို့အားထွက်သည်ဗို့အားသည် ၅ ဗို့အားတိုက်ရိုက်စီးဆင်းမှုလက်ရှိ 1000mA ခဲ - ကင်းစင်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်။
မိုဘိုင်း power supply
၁။ အင်ဂျင်နီယာသည် power supply စီးရီး၏တည်ငြိမ်သောဒီဇိုင်းကိုအသုံးပြုသည်။ circuit ၏ output voltage သတ်မှတ်ချက်သည်ထုတ်ကုန်၏သက်တမ်းကိုပျက်စီးစေခြင်းမှဗို့အားအတက်အကျကိုတားဆီးရန်စဉ်ဆက်မပြတ်တည်ငြိမ်သည်။
၂. ၎င်း၏ကြာရှည်ခံမှုကိုစဉ်း စား၍ တိုက်နယ်ဘုတ်သည်အရည်အချင်းပြည့်မှီသောအမှတ်တံဆိပ်ထောက်ပံ့ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများကို ၀ ယ်ယူရမည်၊ အိုမင်းခြင်းနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းကိုနာရီပေါင်း ၇၂၀ အနှောင့်အယှက်မရှိပြုလုပ်ပြီးယင်း၏သက်တမ်းကိုထပ်မံစစ်ဆေးသည်။ circuit board တွင်အလိုအလျှောက် fuse box၊ high-voltage သို့မဟုတ် short-circuit automatic protection များတပ်ဆင်ထားပြီး၊ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအပြီးတွင် circuit board ကိုအလိုအလျောက်ပြန်လည်တပ်ဆင်ရမည်။
အင်ဂျင်နီယာသည် power supply စီးရီး၏တည်ငြိမ်သောဒီဇိုင်းကိုအသုံးပြုသည်။ circuit ၏ output voltage သတ်မှတ်ချက်သည်ထုတ်ကုန်၏သက်တမ်းကိုထိခိုက်စေသည့်ဗို့အားမတည်ငြိမ်စေရန်တားဆီးရန်စဉ်ဆက်မပြတ်တည်ငြိမ်သည်။
၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းမှကာကွယ်ရန်အတွင်းပိုင်းအလွှာကိုလူမီနီယမ်သတ္တုပါးဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသည်။ - အားသွင်းမျက်နှာပြင်နှင့် USB မျက်နှာပြင်ကို ABS ပစ္စည်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးမျက်နှာပြင်တောက်ပ။ နူးညံ့သောလက်ဖြင့်ခံစားခြင်း၊
ကြာရှည်ခံနိုင်သောအရာအားအဆ ၃၀၀၀ ကျော်ဆွဲထုတ်နိုင်ပြီးအားသွင်းနိုင်မှုစွမ်းအားမြင့်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Charger ပါဝါ Circuit Board ကိုဝယ်ခြင်းဖြင့်အရည်အသွေးပြည့် ၀ သော ၀ န်ဆောင်မှုကိုခံစားနိုင်ပြီးအရည်အသွေးနိမ့်သောစျေးနှုန်းကိုရိတ်သိမ်းနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည် Charger ပါဝါ Circuit Board ကိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ကြိုက် ၀ န်ဆောင်မှုပေးပါသည်။ တရုတ်နိုင်ငံတွင်ထုတ်လုပ်မှုတွင်ကောင်းမွန်သောစက်ကိရိယာနှင့်ကွန်မြူနစ်တို့ပါ ၀ င်သည်။ သင့်ရဲ့ခရီးစဉ်ကိုမျှော်လင့် ~